မိုးရာသီမှာဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ Datingလေးတွေဖန်တီးလိုရတယ်ဆိုတာ ယူတို့သိပါသလား :-P – Trend.com.mm
အဲ့လဲ့…RS လေးတွေသိပ်စိတ်ဝင်စားသွားကြမှာကိုယ်သိနေတယ်။ အခုလိုမိုးတွင်းရာသီမှာ ချစ်သူရည်းစားတွေအတွက်Dateစရာနေရာကအင်မတန်ရှားပါးနေမှာအသေချာပါပဲ။ဟိုနေရာသွားလည်း မိုးမိ ဒီနေရာDateလည်းမိုးမိနဲ့ မိုးရှောင်ရတာနဲ့ပဲသတိရစိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီး ရာသီဥတုကောင်းမဲ့ချိန်ကို စောင့်နေကြရတဲ့ တစ်ချို့အတွဲတွေရှိကြမှာပါ။ဆိုတော့ အခုလိုမိုးတွင်း မလို့ မတွေ့ရတာများပြီး ထိုင်လွမ်းနေရမှာကို တွေးပူမနေပဲ မိုးတွင်းမှာလည်းဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ Datingလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာသတိရလိုက်ပါ….
-ရုပ်ရှင်ရုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကားမျိုးကို ရွေးပြီးသွားကြည့်ပါ။ အခုလိုမိုးတွင်းရာသီမှာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တူယှဉ်တွဲပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလည်းFeel တစ်မျိုးပါပဲ။ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လွမ်းစရာဆွေးစရာကားတွေထက်စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စရာဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ရင်းပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကိုဖန်တီးယူပါ။
-မုန့်တူတူလုပ်စားပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စုပြီး အိမ်တစ်အိမ်မှာ မုန့်တူတူလုပ်စားပါ။ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ဝိုင်းလို့ကူပြီး မုန့်လုပ်စားရင် မိုးတွင်းရာသီကို အိမ်ထဲကနေခံစားရတာဟာသိပ်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဆိုတာယူတို့သိလာပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ဆိုရင်ပေါ့။
-သီချင်းသွားဆိုပါ။ မိုးတွင်းဆိုတော့မိုးလုံလေလုံနေရာတွေမှာပဲဒိတ်ဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာမလို့ မိသားစုKTV လိုနေရာမျိုးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သီချင်းသွားဆိုရင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဖန်တီးပါ။ မိုးလည်းမဆိုတဲ့အပြင်မိုးလုံလေလုံနဲ့သီချင်းလေးဆိုရင်းအေးဆေးDateလို့ရပါတယ်။
-Hot Potသွားစားပါ။ ဟီးးးးဒါကတော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအချက်ပါပဲ။ နွေရာသီလိုပူပူလောလောရာသီမှာလိုချွေးတပြိုက်ပြိုက်နဲ့ စားနေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အပြင်ကအေးစက်တဲ့ရာသီဥတုလေးကြောင့် အရည်ပူပူလေးကို တစ်ယောက်အတွက်တစ်ယောက်မှုတ်ပေးရင်း Hot Pot လေးစားရင်းနဲ့လည်းမိုးရာသီမှာ Ro စရာအချိ်န်လေးကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
ကဲကဲ ပြောနေတာကြာတယ် အပေါ်ကအချက်လေးတွေကို ဖတ်ပြီး မိုးတွင်းမှာချစ်ချစ်တွေနဲ့Dateလုပ်ချင်လာပြီဆိုရင် တော့ ချက်ချင်းသာပြေးDateလိုက်ကြတော့နော်။ ဒါမျိုး Ro စရာအချိန်လေးတွေကမိုးတွေမှာပိုပြီးအဆင်ပြေတာမလို့ မိုးတွင်းလေးမကုန်ခင်မြန်မြန်Roလိုက်ကြပါစို့…
အဲ့လဲ့…RS လေးတှသေိပျစိတျဝငျစားသှားကွမှာကိုယျသိနတေယျ။ အခုလိုမိုးတှငျးရာသီမှာ ခဈြသူရညျးစားတှအေတှကျDateစရာနရောကအငျမတနျရှားပါးနမှောအသခြောပါပဲ။ဟိုနရောသှားလညျး မိုးမိ ဒီနရောDateလညျးမိုးမိနဲ့ မိုးရှောငျရတာနဲ့ပဲသတိရစိတျတှကေိုထိနျးခြုပျပွီး ရာသီဥတုကောငျးမဲ့ခြိနျကို စောငျ့နကွေရတဲ့ တဈခြို့အတှဲတှရှေိကွမှာပါ။ဆိုတော့ အခုလိုမိုးတှငျး မလို့ မတှရေ့တာမြားပွီး ထိုငျလှမျးနရေမှာကို တှေးပူမနပေဲ မိုးတှငျးမှာလညျးဒီလိုခဈြစရာကောငျးတဲ့ Datingလေးတှဖေနျတီးလို့ရတယျဆိုတာသတိရလိုကျပါ….
-ရုပျရှငျရုံမှာစိတျဝငျစားစရာကောငျး၊ ကွောကျမကျဖှယျရာကောငျး၊ စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ကားမြိုးကို ရှေးပွီးသှားကွညျ့ပါ။ အခုလိုမိုးတှငျးရာသီမှာ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့တူယှဉျတှဲပွီးရုပျရှငျကွညျ့ရတာလညျးFeel တဈမြိုးပါပဲ။ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ လှမျးစရာဆှေးစရာကားတှထေကျစိတျလှုပျရှားရငျခုနျစရာဇာတျကားတှကေို ကွညျ့ရငျးပြျောရှငျစရာအခြိနျလေးတှကေိုဖနျတီးယူပါ။
-မုနျ့တူတူလုပျစားပါ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဖွဈဖွဈ စုပွီး အိမျတဈအိမျမှာ မုနျ့တူတူလုပျစားပါ။ တဈယောကျတဈလှညျ့ဝိုငျးလို့ကူပွီး မုနျ့လုပျစားရငျ မိုးတှငျးရာသီကို အိမျထဲကနခေံစားရတာဟာသိပျကောငျးတဲ့ခံစားမှုတဈခုဆိုတာယူတို့သိလာပါလိမျ့မယျ။ အထူးသဖွငျ့ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ဆိုရငျပေါ့။
-သီခငျြးသှားဆိုပါ။ မိုးတှငျးဆိုတော့မိုးလုံလလေုံနရောတှမှောပဲဒိတျဖို့ပိုပွီးအဆငျပွတောမလို့ မိသားစုKTV လိုနရောမြိုးမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျသီခငျြးသှားဆိုရငျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့အခြိနျလေးတှကေိုဖနျတီးပါ။ မိုးလညျးမဆိုတဲ့အပွငျမိုးလုံလလေုံနဲ့သီခငျြးလေးဆိုရငျးအေးဆေးDateလို့ရပါတယျ။
-Hot Potသှားစားပါ။ ဟီးးးးဒါကတော့ကိုယျအကွိုကျဆုံးအခကျြပါပဲ။ နှရောသီလိုပူပူလောလောရာသီမှာလိုခြှေးတပွိုကျပွိုကျနဲ့ စားနရေတာမြိုးမဟုတျပဲ အပွငျကအေးစကျတဲ့ရာသီဥတုလေးကွောငျ့ အရညျပူပူလေးကို တဈယောကျအတှကျတဈယောကျမှုတျပေးရငျး Hot Pot လေးစားရငျးနဲ့လညျးမိုးရာသီမှာ Ro စရာအချြိနျလေးကိုဖနျတီးလို့ရပါတယျ။
ကဲကဲ ပွောနတောကွာတယျ အပျေါကအခကျြလေးတှကေို ဖတျပွီး မိုးတှငျးမှာခဈြခဈြတှနေဲ့Dateလုပျခငျြလာပွီဆိုရငျ တော့ ခကျြခငျြးသာပွေးDateလိုကျကွတော့နျော။ ဒါမြိုး Ro စရာအခြိနျလေးတှကေမိုးတှမှောပိုပွီးအဆငျပွတောမလို့ မိုးတှငျးလေးမကုနျခငျမွနျမွနျRoလိုကျကွပါစို့…